ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် AA အဖွဲ့ဝင်များ ပြည်သူများကြား ရောနှောမှုရှိ၊ မရှိ လုံခြုံ? - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်အချို့တွင် AA အဖွဲ့ဝင်များ ပြည်သူများကြား ရောနှောမှုရှိ၊ မရှိ လုံခြုံ?
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁- ရခိုင် ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်များ ပြည်သူများအကြား ဝင်ရောက်ရောနှော နေခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးအရ စစ် ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့ တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင် တော၊ မြောက်ဦး၊ မြေပုံမြို့နယ်များ ရှိ ကျေးရွာများသို့ AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ပြည်သူများနှင့် ဝင် ရောက်ရောနှောနေသည်ဟု သိရ ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် AA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံ တော်မှ အမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ယင်းသို့ ရောနှောနေမှုများကို စစ် ဆေးရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားစာအရ သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လုံခြုံရေးအရ စစ် ဆေးတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ စစ် ဆေးနေတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ရဲ တပ်ဖွဲ့ကတော့ ဒီစာမထွက်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့လုပ်စရာရှိတာတွေ ဆောင် ရွက်နေပါတယ်”ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးကြည်လင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါစစ်ဆေးမှုကို မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီး ဌာနနှင့်တပ်မတော်တို့ စုပေါင်းထား သည့်အဖွဲ့များက မသင်္ကာသည့် နေအိမ်များသို့ ဝင်ရောက်ကာ စစ် ဆေးရန်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စုစာ ရင်းနှင့် လူဦးရေ မှန်၊ မမှန် တိုက် ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ များရယူ၍ ဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ် ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ညွှန် ကြားချက်တွင် ပါရှိသည်။
ယင်းသို့စစ်ဆေးချက်အရ ဗဗ အဖွဲ့ဝင်မည်မျှ ဖမ်းဆီးမိသလဲ ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေး၏မေးမြန်းမှု ကိုမူ ၄င်းက ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။
ယင်းသို့ စစ်ဆေးရန် ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးဆုံး ဖြတ်ချက် အပိုဒ်(၆)၊ အပိုဒ်ခွဲ (က)၊ အပိုဒ်ခွဲငယ် (၁၇)အရ လုပ် ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ သက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို စစ် ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညွှန်ကြား ထားကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ကိုယ်စား ဘဏ္ဍာအခွန်စီမံကိန်း နှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော် အေးသိန်းက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်းအပြင် သက်ဆိုင်ရာစစ် ဆေးသည့်အဖွဲ့များက အကောင် အထည်ဖော်ပြီးစီးမှုကို ပြန်လည် တင်ပြရန်လည်း ညွှန်ကြားစာတွင် ပါရှိသည်။